Sundays | Streatham Central Church
Prefer in English? Click here
Ma u gaajeysan tahay wax ka baxsan dunidan?
Qiyaas inaad dukaan so gashay ado weydinaya su’aashan “fadlan ma kaa heli kara kibis?” Dunkaanlaha na uu kugu yidhi: “Anaa kibis ah!” Waxaad ku fikiri inuu walaan yahay.
Ciise waxu yidhi wax sidan oo kale ah. Hada ka hor wuxu na tusay in uu quudiyey kumanyaal dadah, weyna ku soo noqdeen Cisse si ay u weydistaan kibis badan. Sidee baad Ciise ka fileysaa in uu ku jawaabo? Sidaan ayu yidhi:
“Waxaan ahay kibista nolosha. Kii ii yimaada waligi ma gaajoon doono, kii i amina na waligi ma omanan doono.” (Kitaabka Quduuska Yooxanaa 6:35)
Taasu wa jawab fajac leh. Dadka waxay weydiistaan kibis, Ciise waxu ku jawaabey, waxaan ahay “kibista nolasha”. Ciise sidaas maxuu ula jeedey?
Hadu Ciise dadka kibis siyey, marwalba wey uu bahaanan in ay weydiyaan markasto oo ay gaajoodaan. Cunto wa wax aan laga marmin, lakiin ma aha waxaa ugu muhiimsan. Cunto la’aan jirkeena wuu dhiman. Ciise waxu leeyahey isaga la’aantiis
nafta ama ruxada qofka wu dhiman, isagu waa isha nolosha.
Ma waxaad dareemeysaa wax noloshaada ku sabsaan in ay qaldan yihiin, in aad nasasho laan tahay? Taanu waa sababta naloo abuurey in aano aqoonsano Ciise. Warka wanaagsan waxaa weeye in Ciise uu nolol na siin karo. Gaajada iyo oonka
ruxeena iyo nafteena waxa keliya dherginkara waa Ciise.
Akhri sheekada baybalka
More information in Somali
or WhatsApp 07544 363 632
Isnt the resurrection ridiculous?